Nhandare yeVH haigone kutambwa kubva kuLinux. Sei? | Linux Vakapindwa muropa
EA iri kurambidza vashandisi veLinux kutamba Hondo yeV
Kusvikira nguva pfupi yadarika, uyezve ichiri kutaurwa, Linux yakanga isiri chikuva chekutamba mitambo. Izvo zvave zvichiitika kwemakore mashoma ndezvekuti isu tinogona kutamba akawanda mazita nekuda kwemasevhisi senge iyo inopihwa neSteam kana iyo basa raunoita Feral Inopindirana, inotakura mitambo yakawanda kuLinux iyo pakutanga yaingowanikwa chete yeWindows uye zvinonyaradza. Naizvozvo, kune zvese izvo isu takafambira mberi mumakore achangopfuura, nhau inoenderana ne Battlefield V uye mugadziri wayo EA.
Sezvo isu tichigona kuverenga mukati Reddit, EA iri kurambidza vashandisi veLinux kutamba vhezheni yeHatfield iyo yakaburitswa munaNovember 2018. Kurambidzwa kuri kuita zvachose uye, zvakanyanya, zvinoita sekunge kwakapararira, kana kuti ndiwo mafungiro nenhamba yevashandisi vari kunyunyuta. Chimwe chezvinodiwa kuti "unakirwe" kurambidzwa uku ndechekuti urikushandisa Waini, Microsoft's software emulator.
Nhandare yeV haichakwanise kutamba paLinux + Waini?
Pakutanga, vazhinji vevashandisi vakarambidzwa vari kurambidzwa kubva Kurwisana, sevha inoshandiswa muBF5 uye ine injini yekudzivirira kubiridzira kana kubiridzira. Chii chiri kuitika ndechekuti EA's anti-cheat system iri kuzivisa DXVK, Vulkan-based DirectX kuitiswa iyo inoedza kugadzirisa kusawirirana nyaya, sechinhu chekubiridzira. Pakupedzisira, sisitimu inotenda kuti iyo dura inobvumidza vashandisi veLinux kutamba Hondo yeVari chishandiso chisiri pamutemo, saka zvakafanana izvo zvinotibvumidza isu kutamba iro zita rinotitadzisa kuita kudaro. Zvirinani ndizvo zvazviri paFairFight.
Dambudziko izvozvi nderekuti EA haina zano rekuti izvi zviri kuitika. Paakabvunzwa, mushambadzi anoti mushure mekuferefeta account yakarambidzwa uye chichemo, vakafungidzira kuti matanho akafanira ashandiswa uye haazobvise chirango. Bhugi iri kuitika mune mimwe mitambo zvakare, senge Destiny 2.
Pasina kupokana, bhora riri mudare reEE. Kana ivo vatanga kuwana kuwanda uye kunyunyuta, vachatofanira kunyatsoongorora kukundikana uye uigadzirise, asi panguva ino vashandisi veLinux havagone kutamba Hondo yeV pane imwe yeeseva akanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EA iri kurambidza vashandisi veLinux kutamba Hondo yeV
WINE haisi xD emulator
Uye ndosaka vanhu vachirasikirwa nekutenda muLinux, ini ndoziva zviri kungotaura asi richiri iro dambudziko rinowanzoitika, Linux pachayo haisi kambani! Saka izvi ndizvo zvinhu zvinoita kuti urasikirwe nevateveri nekuti maturusi epamusoro anoshandiswa ari mhinduro yakanaka pakuita chero chinhu, zviri pachena kana vasina mari yavanowana haigone kuvapo.
baba veMongolia vakanyora izvo akadaro
Jajajaajja dambudziko nderekuti linux pachayo haisi kambani? Ivo vanofanirwa kuisa chiitiko chinonzwisisika kuti vawane oxygen uye chero asingakwanise kuigadzirisa haawane hupenyu.
Pindura kuna baba veMongolia vakanyora izvo
mm, vanoisa mari yevatambi kuti vashandise windows ...
Reiser5 faira system mukusimudzira inosanganisa rutsigiro rwekuyera kwakaenzana
Zvirinani Linux dzimwe nzira kuWindows, ikozvino iyo W7 iri kuzofa